Fikarohana momba ny firaisana Zazalahy Silamo iray teraka indray ao amin'ny fianakaviana bodista: ny tranga taloha niainan'i Wijanama Kithsiri - Fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Ahoana no nahatonga azy: Fahatsiarovana ny fiainan'ny ankizy fahiny
mpikaroka: Ian Stevenson, MD ary Francis Story
From: Ireo trangan-javatra momba ny karazana gay vaovao, Boky II, Ireo tranga folo any Sri Lanka
MG Wijanama Kithsiri dia teraka tamin'ny volana 28, 1959 tao amin'ny tanàna Sri Lankan ao Wehigala, izay nonenan'ny olona 1000 tamin'izany. Ny rainy dia WMG Ariyawansa ary ny reniny dia MJ Kusumawathie. Ny Buddhist sy Sinhalese no fianakaviana, izay vondrona foko teratany ao Sri Lanka izay miteraka 75 isan-jaton'ny mponina. Niresaka ny fiteny Sinhalese izy ireo. Ny mponina rehetra any Wehigala dia ireo Bodista Sinhalese, tsy misy Miozolomana na Tamoul izay monina ao amin'ilay faritra. Ny mpihinana zava-maniry ilay fianakaviana.
Ny Epizoda Nocturnal of Xenoglossy: Miteny fiteny tsy fantatra
Tamin'ny telo taona i Wijanama dia nanomboka nipetraka teo am-pandriana tamin'ny misasak'alina ary niampita ny tongony ary hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ny ray aman-dreniny. Tamin'ny takariva iray mahazatra, dia niara-natory niaraka tamin'ny fianakaviana sisa tao amin'ny PM Xumum Wijanama. Teo anelanelan'ny 9 PM sy ny misasak'alina, hipetraka izy ary hanomboka hiresaka andininy amin'ny fiteny tsy fantatra. Izany dia haharitra 10 hatramin'ny minitra 3 aorian'izany dia handry izy ary hiverina mody. Indraindray dia nitsangana izy ary niezaka niala tao an-trano, kanefa ny fianakaviany dia nanakana azy tsy hiala. Nanamarika ny ray aman-dreniny fa toa sahiran-tsaina i Wijanama nandritra ireny episodiadia ireny, izay nitohy nandritra ny alina, farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny taonan'ny 15, tamin'izany fotoana izany mbola mitohy ny fampiharana.
Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha momba ny Fahatongavana ho nofo tao Kandy
Tamin'ny faha-efatra taonany dia nanomboka niresaka momba ny taloha i Wijanama izay nanambarany fa mipetraka ao an-tanànan'i Kandy izy. Kandy dia any amin'ny havoanan'i Sri Lanka sahabo ho 25 kilometatra na 15 kilaometatra miala ny tanànan'i Wijanama any Wehigala. Nilaza izy fa manana ray sy reny hafa izy, fa hihinana mipetraka eo ambony tsihy izy ireo ary hisaron-doha ny reniny. Nanambara ihany koa izy fa tamin'ny fiainany taloha dia misy jiro, izay fanambarana tsy mahazatra satria tsy nanana herinaratra ny tanànan'ny fianakaviana Wehigala. Mifanohitra amin'izany kosa, Kandy no nisy herinaratra. Nilaza ihany koa izy fa ny rano dia avy amin'ny fantsona akaikin'ny lakozian'izy ireo, izay mety ho marina ho an'i Kandy izay nanana rafitry ny rano fantsona, fa tany Wehigala kosa ny rano ihany no azo. Nilaza ihany koa i Wijanama fa nahita sary na sarimihetsika mampihetsi-po izy, izay tsy nisy tao amin'ny tanàna ambanivohitra fa misy any Kandy.
Ian Stevenson nanazava fa Kandy dia tanàn-dehibe manana mponina samihafa izay ahitana Bodista, Tamil Hindus ary Silamo. Ny vahoaka Tamil dia foko hafa ao Sri Lanka izay miteny ny fiteniny, Tamil. Ny Tamila tamin'izany fotoana izany dia nahitana ny 20 isan-jaton'ny mponina Sri Lankan. Ireo Silamo ao Kandy koa dia miteny ny fiteny Tamil.
Naneho faniriana mafy hahita ny ray aman-dreniny teo aloha i Wijanama. Nilaza i Wijanama fa voan'ny tazo izy ary maty fony mbola zazalahy mpianatra, na dia tsy nahatadidy ny anarany aza izy tamin'io nofo taloha io. Nilaza izy fa nahatratra ny kilasy fahatelo tao Kandy.
Wijanama dia nilaza fa nahita ny Perahara izy, izay fety ara-pivavahana izay ahitana paradisa mamolavola sy elefanta voaravaka. Tsy dia nankalaza io fetibe io ny tanànany, fa tao Kandy kosa dia nandalo ny kianja Street. Wijanama dia nilaza marina tsara fa tao Perahara dia nisy elefanta goavambe sy dihy betsaka.
Wijanama dia mamaritra ny fiainana taloha Miozolomana
Wijanama dia nanao fanambarana maromaro milaza fa Silamo izy tamin'ny fiainany teo aloha. Rehefa hitan'i Wijanama vehivavy iray misy hijab na loha-tady eo amin'ny lohany, izay nentin'ny vehivavy Miozolomana, dia hoy izy, "Toy izany ny reniko." Ian Stevenson dia nanamarika fa ny fihazakazak'i Wijanama amin'ny fonenana miaraka amin'ny tongotra dia toerana matetika amin'ny silamo mandritra ny vavaka.
Nilaza koa izy fa nihinana hena tamin'ny fiainany teo aloha, na dia tsy hihinana henan-kisoa aza izy. Fomban-tsakafo mahazatra Silamo mahazatra izany, saingy mifanohitra amin'ny fahazaran'ny fianakaviany biolojika, izay mpihinan-kena. Wijanama dia naneho ny fahadisoam-panantenany tamin'ny toe-javatra niainany ankehitriny satria nitantara izy fa ny fiainam-pianakaviany taloha dia tsara lavitra noho ilay taloha. Raha vao tezitra izy dia nilaza hoe: “Ao amin'ny tranoko iray hafa dia misy siramamy betsaka ary te-ho any aho.” Nilaza koa i Wijanama fa misy hena be dia be.
Ny fahazarana silamo hafa iray izay nasehon'i Wijanama dia nitazona ny lohany nanarona tamin'ny mavo iray nafatotra tamin'ny kofehy tany aoriana. Ankoatr'izay, izy dia hitondra ny sarongany, izay karazana akanjo, betsaka lavitra kokoa amin'ny tongotra, izay ataon'ny Miozolmana mba hahafahany manasa ny tongony rehefa miditra moske. Ankoatr'izay, raha nihinana teo amin'ny latabatra ny fianakaviany, dia nipetraka teo am-baravarankelatra i Wijanama ary taorin 'ny sakafony dia nanosika ny vavoniny sy ny vavany izy. Ian Stevenson dia nitantara ireo fitondran-tena fisakafoanana ireo dia tandindon'ny silamo ao amin'ilay faritra.
Niteny matetika i Wijanama fa te hiverina any amin'ny trano fonenany tsara kokoa izy ary hivavaka amin'ny moske. Ny fahatsiarovany ny fiainany taloha dia toa niaina ary niresaka momba ny fahateraham-baovao teo anatrehany izy amin'izao fotoana izao, toy ny hoe mbola mbola velona izy hatramin'izao.
Manondro ny fiainany Silamo taloha, Wijanama dia manakiana ny fivavahana bodista
Wijanama dia nanohitra tanteraka ny fombafombam-pivavahana bodista an'ny fianakaviany ary nahatsapa ho voaroaka tamin'ny sary tany amin'ny tempolin'ny bodista izy. Hoy izy: “Izay ivavahantsika dia tsy ananantsika ireo sampy sy sarivongana rehetra ireo. Tsy maintsy mametraka tsihy amin'ny tany isika. Manasa ny vatantsika isika ary mipetraka eo ambonin'ny tsihy ary mivavaka. Misy pretra mihorakoraka eo an-tampon'ny feony. Tsy misy vehivavy mandeha any. ” Nilaza koa izy fa misy fantsakana misy rano ao amin'ny toeram-pivavahany. Wijanama dia nanao ireo fanambarana ireo talohan'ny nahitany mosque.
Ny filazalazan'i Wijanama momba ny toeram-pivavahany dia mifanitsy amin'ny moske Miozolomana, izay tsy ahafahana maneho ny sarin'ny fivavahana na ny endrika hafa, izay manasa ny tongony any anaty dobo filomanosana mialoha ny fidirana ary ny olona mipetraka eo am-baravarankely. Ilay "pretra mihorakoraka eo an-tampon'ny feony" dia maneho ny muezzin, izay miantso ny fiarahamonina Miozolomana ho amin'ny vavaka, matetika amin'ny fampiasana ny rafitra fanamafisam-peo.
Manesoeso i Wijanama ary antsoina hoe "The Muslim"
Raha niaina tao amin'ny vondrom-piarahamonina iray feno Buddhists Sinhalese i Wijanama dia niaina fanesoana tamin'ny mpiara-mianatra noho ny fitondrantenany Miozolomana. Izy ireo dia hanosika azy ary nomeny anarana hoe "The Muslim." Wehaama dia namaly tamin'ny alàlan'ny trano fonenany ary nangataka ny halefa any amin'ny rainy taloha. Na dia izany aza, nanohy nanizingizina izy fa Silamo teo amin'ny fiainany taloha ary mbola Silamo izy.
Mpitahiry Vendrana: Fianakaviana efa ela
Wijanama dia matetika no nilalao tamin'ny fanaovana trano fivarotana na fivarotana, izay hovahany raha vantany vao tonga any an-trano izy. Nampiasa masomboly mena izy mba hanehoana an-tsoratra ny hena sy ny tapa-taratasy handravahana ny lamba. Nody nividy legioma sy kilalao izy. Tamin'ny nofinofy dia nilaza izy fa nahita ny rainy taloha izay nitondra legioma tao amin'ny fivarotana tao anaty sarety iray. Nanamarika i Wijanama fa rehefa miposaka izy dia hahazo trano fivarotana na boutique.
Ny ankizy miaraka amin'ny fahatsiarovana ny fiainany taloha dia matetika mamerina ny asa vitany taloha tamin'ny lalao. Ohatra iray mampihetsi-po mahakasika ny tranga vao teraka indray ao Ahmet Delibalta | Erkan Kilic, izay nitenenan'i Erkan, fony izy ankizy, dia nanao fomban-draharaham-pandihizana, izay ny fiantsoana azy taloha fony i Ahmet Delibalta. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any:
Trangam-panjakan'izao tontolo izao any Ahmet Delibalta | Erkan Kilic
Indraindray, ny rainy dia naneso fa sarotra be ny fisian'ny Silamo hiditra ao amin'ny fianakaviana. Ho an'ity, dia tezitra i Wijanama hoe: "Tsy olombelona ve isika rehetra? Aza milaza an'izany amin'ny hafa! "
Wijanama dia mahita ny Moskea niainany tany Kandy
Rehefa dimy taona i Wijanama dia nitondra azy tany Kandy ny fianakaviany mba hahita ny Bodista Tempolin'ny nify, mari-pamantarana ny faritra. Avy any dia nanomboka nandefa ny reniny tany amin'ny King Street i Wijanama ary nilaza fa te handeha any amin'ilay toerana nivavahany izy. Rehefa tonga tao amin'ny Moske King Street izy dia nilaza i Wijanama hoe: "Io no toerana nivavahantsika." Nanamarika i Wijanama fa niova ny tohatry ny moskea. Ity fanamarinana ity dia nanamarina ny ofisialy iray tao amin'ny moske.
Teo akaikin'ny tranombakoka Mpanjaka Street Wijanama dia nahita trano iray ary nitarika ny rainy. Tsy nandondona teo am-baravarana izy ireo raha raiki-tahotra ny hiresaka momba ny famerenana amin'ny maty ao amin'io fiarahamonina Miozolomana io ny rain'i Wijanama, satria tsy anisan'ny fotopampianarana silamo ny firaisana amin'ny vatana. Tao amin'ity faritra ity, i Wijanama dia nahita ny lakandranon'ny fantsom-drano iray ary nilaza izy hoe: "Nanasa sy nandro tao izahay."
Xenoglossy: Nolavina ny fandefasana an'i Wijanama
Raha nanadihady an'io tranga io i Ian Stevenson, dia nisy fanangonan-tsakafo natao tamin'ny witeny nandritra ny alina. Tao anatin'io fandraketana io, dia nisy teny efatra niverimberina. Ireo teny ireo dia:
"Allaha," izay teny arabo ho an'Andriamanitra
"Umma," izay teny Tamil ho an'ny reny
"Vappa", izay teny tamily hoe tamily
Stevenson dia nanamarika fa i Umma sy i Vappa dia ampahany amin'ny voambolan'ny fiteny ofisialy miteny silamo ao Kandy. Ankoatra izany, rehefa nihaino ny fampiratiana fampakaram-bady i Stevenson dia nanana mponina Miozolomana Kandy, nilaza ity olona ity fa ny ankizy silamo iray ihany no afaka manonona ireo teny ireo araka ny tokony ho izy. Stevenson dia nandika ilay fitadidiana ho toy ny vavaka tamin'Andriamanitra izay niangavy an'i Wijanama mba ho tafaraka indray amin'ireo ray aman-dreny niaina taloha.
Misy teny hafa ampiasain'i Wijanama izay midika fa niaina tany Kandy izy tamin'ny fiainany teo aloha. Ohatra, rehefa nanontaniana raha ampy sakafo izy, dia namaly "podong" i Wijanama, izay teny Tamil ho an'ny "ampy". Mifanohitra amin'ny teny Sinhalese kosa ny ampy, izay "aithie."
Tao amin'ny 1970, fony i Wijanama dia 11 taona, dia mbola nanohy ny fihetsiky ny zazalahy Miozolomana izy ary mbola nanohy nanao izany tamin'ny fandefasana ny trano fivarotana izy taorian'ny fianarany. Ny fomban-draharahany tamin'ny alina, nipetraka teo am-pandriany, ary nitalaho tamin'Andriamanitra ary niresaka momba ny fiainany taloha sy ny rainy.
Ny fanambarana nataon 'i Wiljanama dia nanohana mafy mafy fa efa niaina ela teo amin'ny maha-Silamo azy tao Kandy izy. Araka ny efa nomarihina, tsy nahatsiaro ny anarany taloha izy, izay nahatonga ny fialan-tsasatra tamin'ny fiainany taloha. Ankoatra izany, Ian Stevenson dia nanamarika fa ny Miozolomana any Kandy dia tsy sahy nanampy tamin'ny famantarana ny fiainan'i Wijanama teo aloha, satria tsy anisan'ny fivavahany ny firaisana amin'ny vatana.
Fiovan'ny Fivavahana sy ny Ethnicity: Nahatsiaro i Wijanama fa zazalahikely silamo izy tamin'ny fiainany taloha, fa tamin'ny fiainany ankehitriny dia teraka tao amin'ny fianakaviana Sinhalese Buddhist izy.
Fiainana Talenta sy fitondrantena taloha: Wijanama naneho fihetsika izay mampiavaka ny zazalahy Miozolomana iray. Ankoatr'izany, azony natao ny nitandrina ny anjara asan'ny mpivarotra iray, izay mety haneho ny fiantsoana azy taloha.
Xenoglossy: Tamin'ny teny fohifohy nataon'i Wijanama, nampiasa teny Arabo sy tambajotra izy, na dia tsy niaina tao an-tanànany aza ny Arabo na ny Tamoul, ary tsy nisy na iza na iza tao amin'ny fianakaviany nahalala na nahatakatra ireo teny ireo. Ny fahafahana miteny fiteny izay tsy nianatra tamin'ny fomba mahazatra dia antsoina hoe xenoglossy. Ny teny arabo sy tamoul izay nampiasain'i Wijanama dia nianatra nandritra ny fiainany taloha tany Kandy, izay nitenin'ny mponina Silamo ny fiteny Arabo sy Tamil.
Fahatsiarovana jeografika: Indray mandeha tany Kandy, i Mijanama dia nahita ny toetrany taloha tao amin'ny tranon'ny moske ary angamba ny fiainany taloha.
Loharano: Stevenson, Iana: Ireo trangan-javatra momba ny karazana sariitatra vaovao, Sri Lanka, Boky II, pejy 326-360